Finday sy Internet any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Ireo mpandraharaha, ny taroa
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Serasera finday sy Internet any Sri Lanka
Serasera finday sy Internet any Sri Lanka
Fifandraisana momba ny finday ao Sri Lanka. Toe-javatra ankapobeny
Aiza ary ahoana no hividianana karatra SIM any Sri Lanka
Ireo mpandraharaha finday ao Sri Lanka
Hutch (+ Etisalat)
Fifandraisana amin'ny Internet amin'ny finday any Sri Lanka
Wi-Fi any Sri Lanka
Serasera finday sy Internet any Sri Lanka: Famaritana ankapobeny
Ny serasera finday sy ny Internet eto amin'ity firenena ity dia novolavolaina tanteraka ary tsy lafo. Tsy mitombina ny fampiasana ny karatra SIM an'ny firenenao raha mifanerasera roaming mandritra ny any Sri Lanka ianao. Eny tokoa, ho mora kokoa ny mividy karatra SIM eo an-toerana amin'ny fampiasana azy roa ho an'ny antso ato amin'ity firenena ity, ary hiantso ny anao sy amin'ny firenena hafa, ary koa amin'ny Internet finday. Ohatra, resaka mandritra ny 1 minitra raha miantso ao Rosia amin'ny laharana finday iray avy amin'ny karatra SIM Lankan SIM dia mitentina 15 isan-taona rupees Sri Lankan (rubles Rosiana 6). Mora ny mividy, manafaka ary manetsika ny karatra SIM. 10 minitra eo ho eo izany rehetra izany.Ary mety ho vita izany raha tsy nahalala ny teny anglisy ihany. Ampy ny hangataka ny mpivarotra mba hanao ny zava-drehetra ho anao.
Vantany vao nandao ilay fiaramanidina tao amin'ny seranam-piaramanidina Colombo ianao, ny mpizahatany dia afaka mividy karatra SIM Sri Lankan miaraka amin'ireo fonosana fifandraisana izay misy antso an-tariby ao anatiny ao Sri Lanka sy ny Internet sasany amin'ny gigabytes (tsy misy Internet finday tsy voafetra eto amin'ity firenena ity).
Ao amin'ny seranam-piaramanidina dia misy teboka amidy ny mpandraharaha finday rehetra any Sri Lanka:
Ny vidin'ny karatra SIM ambany amin'ny seranam-piaramanidina dia Rs 1. Ny tanànany no mora vidy kokoa, fa tsy amin'ny be dia be. Ny ampahany lehibe amin'ny vidin'ny karatra SIM (ohatra: 200 rupee avy amin'ny 800 voatondro) dia ampidirina any amin'ny kaonty finday rehefa ampiasaina io carte io. Raha ilaina dia arotsaka ho an'ny nano na micro.
Ny tarehin-kevitra natolotra dia misy hatrany amin'ny Internet - 2 ka hatramin'ny 28GB.
Kalkulator converter (dolara ny tahan'ny fifanakalozana any Sri Lanka)
Eto ambany, ho an'ny fampitaovana dia azonao atao ny mampiasa calculer calculator. Rehefa atao ny kajy dia dinihina foana Ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny amin'ny Sri Lankan Rupee amin'ny dolara na vola hafa tianao amin'ny safidy.
Sri Lanka manana mpandraharaha maromaro:
Dialog - 10 tapitrisa mpampiasa.
Mobitel - 7 tapitrisa mpampiasa
Etisalat + Hutch - 7 tapitrisa mpampiasa (tamin'ny 30 Novambra 2018, Etisalat dia novidian'i Hutch)
Airtel - 4 tapitrisa mpampiasa
Ny tsara indrindra ary ny malaza indrindra dia azo antsoina Mobitel и fifanankalozan-kevitra. Ireo mpandraharaha ireo dia manana fandrakofana faran'izay lehibe sy avo lenta amin'ny fifandraisana.
Dialog dia somary misy fandrakofana kely kokoa noho i Mobitel, ary somary tsara kokoa ny fifandraisana, saingy avo kokoa ny tariff.
Mobitel dia miaraka amin'ny Dialog, somary ambany kely raha jerena ny kalitao, saingy somary kely kokoa kosa i Mobitel.
Samy manana ny momba izany ireo roa ireo 4G.
Eto ambany dia heverinay amin'ny antsipirihany ny mpandraharaha tsirairay ao Sri Lanka
Mpampiasa finday fifanankalozan-kevitra (Dialogue)
Mpampiasa finday fifanankalozan-kevitra, amin'izao fotoana izao dia ny lehibe indrindra mpandraharaha finday ao Sri Lanka (Mpanoratra 9 tapitrisa = 35% amin'ny tsena). Manome fandrakofana malalaka indrindra ao amin'ny nosy izany, ary avo lenta kokoa noho ny an'ny mpandraharaha hafa (2019) ny kalitaon'ny fifandraisana. Ary koa, io operator io (sy Mobitel) dia manolotra ary manohana ny 4G.Ny vidin'ny serivisy kosa dia somary avo kokoa noho ny mpandraharaha hafa.
Sarintany Dialog Coverage
Ny karatra SIM Dialog dia mitentina 150 rupee. (mila manome pasipaoro ianao)
150 rupees ny vidin'ny hanaisotra Karatra SIM, izay mbola mila averina mameno sy manavao. Izany rehetra izany dia hatolotra anao hanao izay toerana nivarotanao azy.
Mba hanaovana izany, mila mividy kitapo manokana karatra ianao, izay efa misy minitra vitsivitsy ho an'ny fiantsoana mivoaka, SMS iray sy fifamoivoizana finday sasany.
Raha mpizahantany ianao, avy eo manana fidirana voafetra voafetra ianao, ny mampiavaka azy ireo dia miasa amin'ny vola mialoha mialoha izy ireo.
Raha ny vola ataonao dia ny mitahiry vola mazava, ary mieritreritra ianao fa ho tonga amin'ny Internet atolotra amin'ny hotely sy toerana hafa, dia afaka mividy karatra madio ianao ary tsy mampifandray ireo fonosana starter, fa mividy fotsiny karatra recharge ho an'ny 100, 200 na 400 rupees. (Azo atao na aiza na aiza izany afa-tsy ny seranam-piaramanidina).
Tarifa ho an'ny mpizahatany - Drafitra fizahantany Dialog
Ny fonosana fitsangatsanganana malaza indrindra amin'ny serasera finday - Drafitra fizahantany Dialog. (2019). Izy ireo dia misy karazana roa:
Vidiny - 1299 ropia (eo ho eo 6 USD)
Rupe 600 eo amin'ny kaonty mitaky ireo antso an-toerana any an-toerana
Vidiny - 499 ropia (eo ho eo 2,9 USD)
250 rupees amin'ny kaonty
100 rupe no niantso ny laharana eo an-toerana
Karatra ambony indrindra - Karatra Dialog Internet
Ankoatr'izay, azonao atao ny mividy karatra batch hamenoana Karatra Internet Dialog
Ny vidiny dia miovaova 29 до 699 Rs. Izy ireo dia ahitana fifamoivoizana voafetra, ary minitra maromaro ho an'ny resaka ao anaty tamba-jotra fifanankalozan-kevitra
Ohatra iray amin'izany fonosana izany dia 1GB amin'ny Internet, 500 SMS amin'ny telefaona Dialog, 50 resaka minitra ao amin'ny tambajotra Dialog, manan-kery 30 andro. vidin'ny 199 rupee (1,1 dolara)
Azonao atao ny mividy fifamoivoizana amin'ny Internet fotsiny - 699 rupees ho an'ny 5000 Mb. Fahamarinana 30 andro
Raha mila serivisy fanamafisam-peo amin'ny telefaona finday hafa ianao na mivezivezy, avy eo dia mila mamerina mamerina ny kaonty misaraka ianao.
Antso fiantsoana antso amin'ny Sri Lanka (tendrony)
Okraina - 35 rupees / minitra
Belarosiana - 80 rupees / minitra
Israel - 30 rupees / minitra
Latvia - 80 rupees / minitra
2 rupees / minitra
MyDialog Mobile Application (Android)
Fampiasa finday tena mahasoa ho an'ny Android sy IOizay mamela:
Manova na mifantina drafi-pandeha
Jereo ny fifandanjana amin'ny minitra, ny fifamoivoizana amin'ny Internet ary ny SMS
Manondro ny sisa ny valin'ny fonosanao.
LP ofisialy APP momba ny kilalao Google
LINK ofisialy APP amin'ny APP Store
Ahoana no ahalalana ny nomeraonao. Hamarino ny fifandanjana sy ny isa vitsy hafa amin'ny Dialog
Zahao ny fifandanjanao - 456 #
Zahao ny fifandanjana amin'ny alàlan'ny SMS - SMS misy isa 456 miaraka amin'ny lahatsoratra Bill
Fantaro ny drafi-pandoavanao - # 678 #
Recharge avy amin'ny karatra marika - * Kaody # 123 # PIN avy amin'ny karatra #
Ahoana ny fomba hananganana ny fifandanjan'ny Dialog
Recharge avy amin'ny karatra marika - * Kaody # # # # karatra karatra #
Recharge an-tserasera fifanankalozan-kevitra - https://www.dialog.lk/browse/payments.jsp
Ampidiro ny fampiharana finday MyDialog (Android / iOS)
Eto am-pivoriana saika fivarotana saika misy fivarotana eny an-toerana. Lazao ny isa, ny habetsaky ny famerenana, hanome vola sy Voila! :). Matetika no sarany ny sarany iray.
Fampahalalana fanampiny ilaina:
Tranonkala Ofisialy fifanankalozan-kevitra - https://www.dialog.lk/index.jsp
Amin'ny tranga sasany (indrindra amin'ny fitaovana taloha), ny hametrahana Internet finday, mila mamaritra ny teboka fidirana ianao APN. (dialogbb. ppwap)
Raha miantso ny laharana Sri Lankan - 077 (xxxxxxxx)
Raha miantso ny laharana Sri Lankan iray any ivelany - +947 (xxxxxxxx)
Ho an'ny antso avy any Sri Lanka any ivelany, ny format diail mahazatra dia ampiasaina.
Ahoana ny hanavaozana ny fonosana:
Rehefa mamerina ny kaonty finday ho an'ny rupee 100, ny fananana ilay fonosana dia maharitra iray volana
Rehefa feno indray ny r rupes 1000 - nandritra ny herintaona.
Fangatahana fanovana sy fisafidianana tarif ho an'ny mpandraharaha finday any Sri Lanka - “Plan Data 4G Sri Lanka” (Android irery)
Mpampiasa finday Mobitel
Ny maha-ara-dalàna ny drafitry ny tarif dia 365 andro.
Fetra - 20GB (avy amin'ny 9.00-23.59)
Ny votoaty amin'ny Internet - drafitra taratasin'i Mobitel (Desambra 2019)
Tranonkala ofisialy Mobitel - https: //www.mobitel.lk/
Raha tsy izany dia APN: mobitel3g
Mpampiasa finday Etisalat. Sri lanka
Mandra-pahatongan'ny taona 2018 dia ilay orinasa mobile an'ny Sri Lanka, Etisalat, dia an'ny orinasa Etisalat Group avy any UAE. Tamin'ny taona 2018, CK Hutchison (tompon'ny finday Hutch) dia nanambara fampivondronana miaraka amin'ny Etisalat Group any Sri Lanka. Ary tamin'ny 30.11.2018 Novambra XNUMX ity fitrandrahana ity no nitranga. Nanomboka teo dia ny tsatokam-pahefana mifehy ao Etisalat dia fananan'ny tompon'ny mobile mobile Hutch.
Ny tranokala Etisalat ofisialy dia natokana hamerina ny tranonkala Hutch. Amin'ny ankapobeny ... nijanona teo amin'ny tantara i Etisalat ary tsy izy hut.
Raha resaka momba ny Internet 4G dia somary ao ambadiky ny Mobitel sy Dialog ity operator ity, ary amin'izao fotoana izao (Desambra 2019), ny fitaterana 4G dia tsy hita any andrefan'ny Nosy any Colombo sy ny eo akaikiny ihany.
Hutch dia mizara SIM-karatra maimaim-poana, ary ny vidin'ny fonosana starter ankehitriny dia azo jerena HERE
Hutch Call rates any Sri Lanka (2019)
Russia - 31rupees / minitra
Okraina - 27rupees / minitra
Belarosiana - 110rupees / minitra
Israel - 23rupees / minitra
Latvia - 110rupees / minitra
Inland - 0,25 Rupee
Ahoana no ahafantarana ny fandanjalanjana hutch anao
antsoy ny isa fohy * 344 #
Mandefa SMS miaraka amin'ny lahatsoratra amin'ny 344 na Dial
Ahoana ny fomba hamatsiana ny kaonty Hutch anao
Misy ny fandoavam-bola amin'ny Internet rohy (tranonkala ofisialy)
Afaka mandoa vola amin'ny serivisy ianao Webmoney
mampiasa karatra kambana - * 355 * kaody am-paosy amin'ny karatra #
Fantaro ny fifandanjanao, ny isa, ny fitantanana tarif
Fantaro ny fifandanjanao - * 344 #
Fantaro ny nomeraonao - # 132 #
Fantaro ny teti-bidinao sy ny fifandanjana ao aminy - * 131 #
Tranonkala ofisialy https://www.hutch.lk/
Azo jerena ao amin'ny tranokala ofisialy ny fandoavam-bola an-tserasera rohy (tranonkala ofisialy)
25% ny hetra tokony hampiana amin'ny tarehimarika rehetra amin'ny tarany.
Mpampiasa finday Airtel. Sri lanka
Ny operator mobile Airtel Lanka Limited dia mpamatsy vola amin'ny Bharti Airtel Limited - mpandraharaha finday fahatelo lehibe indrindra eto an-tany (2015). Nefa any Sri Lanka, Airtel no farany amin'ireo mpandraharaha eto an-toerana. Izy io dia manana ny fandrakofiana malemy, ny lazan'ny ambany indrindra (famandrihana 2 tapitrisa), tsy ny serasera avo lenta ary ny Internet tsy hita 4G.
Ity mpandraharaha ity dia tsy misy tarehim-pahaizana ilaina amin'ny fizahantany.
Fa ny vaovao manentana dia ny hifandray amin'i Dialog, mpitarika ny tsenan'ny serasera any Sri Lanka, tsy ho ela.
Aterineto any Sri Lanka
Tahaka ny voalaza etsy ambony, tsy misy tarehim-bola tsy voafetra amin'ny SIM-carte ho an'ny mpizahatany any Sri Lanka. Na izany aza, ny fonosan'ny serasera finday efa misy dia azo raisina ho ampy ho an'ny fampiasana amin'ny Internet finday.
Ireo mpikirakira finday lehibe indrindra any Sri Lanka ao amin'ny faritra 4G fandrakofana, ny haingam-pandeha dia azo ekena, araka ny hitanao ao amin'ny pikantsary.
Fa amin'ny ankapobeny, mba hijery horonan-tsary amin'ny Internet, mandeha amin'ny Internet, ampy ny 3G, izay ananan'ireo mpandraharaha etsy ambony dia manerana ny nosy, afa-tsy amin'ny toerana be dia be.
Ho fanondroana. Ao atsinanan'i Sri Lanka, any amin'ny faritra Trincomalee kely ny coating Mobitel, any amin'ny toerana hafa dia eo amin'ny par na somary aoriana aoriana fifanankalozan-kevitra.
Ny Wi-Fi maimaim-poana dia misy any amin'ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fivarotan-tsakafo. Any amin'ny seranam-piaramanidina Colombo izy.
Mampalahelo fotsiny, tsy manonona Wi-Fi maimaimpoana ao amin'ny famaritana trano fandraisam-bahiny mihitsy no miantoka ny fahazoana azy ao amin'ny efitranonao. Indraindray ianao dia afaka "misambotra azy" ihany amin'ny fandraisana ny hotely.
Mba hahazoana tombony ara-toekarena, ny tompon'ny trano fandraisam-bahiny dia manilika ireo làlam-pandeha amin'ny alina, ka tsy maintsy angatahin'izy ireo izy ireo hamerina izany.
Cable Internet dia tsy fahita firy ao amin'ny hotely Sri Lanka. Amin'ny maha-fitsipika azy, ny mpandrindra finday dia ampiasaina. Ankoatr'izay, ambany ny haingam-pandeha, tsy maharitra ny fifandraisana. Noho ireo antony ireo, raha tena mila Internet ianao, tokony hividy karatra SIM misy teny mahasoa amin'ny Internet, ary tsy miantehitra amin'ny Wi-Fi.
Wi-Fi maimaim-poana eny an-dalambe amin'ireo tanàna mipetraka eto amin'ity firenena ity dia mbola tsy misy, na dia amin'ny faritra fizahan-tany aza. Angamba amin'ny ho avy tsy ho avy. 😉
Manantena izahay fa hanampy anao aminao ny fampahalalana an'ity pejy ity!
Miezaka izahay miantoka fa ny fampahalalana aseho amin'ny tranokala dia misy.
Raha manana zavatra hanampy ianao, na manana fanontaniana, dia anontanio izy ireo amin'ny endrika eto ambany.
Niala sasatra tao Tangalle (Tanàna ao atsimon'i Sri Lanka) aho ary tiako ny manamarika fa ny Wi-Fi nozarain'ireo hotely dia "tsia" fotsiny.
Na dia tsy lavitra ny loharano aza ianao dia ho malemy be ny Internet. Indrindra raha mampiasa Internet ity ianao hisintona sary nalaina isan'andro isaky ny rahona. Avy eo, ankoatry ny fandefasana ity pumping ity dia tsy hisy na inona na inona dia mety ary dia ho miadana tokoa.
Ny maha-eo amin'io faritra io amin'ny hotely maro na aiza na aiza no misy an'io olana io. Raha ny loharanom-baovao amin'ny Internet, ireo trano fandraisam-bahiny dia nampiasa ny router mobile 4g ​​Dialog.
Saingy raha nandry tany Trincomalee (andrefan'i Sri Lanka) ny olana toy izany, dia tsy nahatsikaritra ny fahasarotana toy izany. Ny asa rehetra dia niasa betsaka na tsy nijanona ary tsy namela fahatsiarovana ratsy.
Teo sy tao no nampiasa ny mpandraharaha Dialog.